3D Yakavezwa Dombo-Wall & Art - Morningstar Dombo Co, Ltd.
Yakachena Sivec Kunze kwesitayera dhizaini 3D yakavezwa madziro
Iyi nhanho yakakosha uye yakakosha kune ese matanho anotevera. Matombo emabwe machubhu uye matombo akaparadzirwa zvakagadzirwa zvisizvo izvo zvakagadzirira kugadziriswa. Kusarudzwa kwezvinhu kunoda ruzivo rwakarongeka rwevanyori uye mashandisiro uye pfungwa yakagadzirira yekudzidza chero chinhu chitsva. Kuongorora kwakadzama kweiyo mbishi kunosanganisira: kuyera kurekodha & kutaridzika kwechitarisiko kutarisa. Maitiro ekusarudza chete anoitwa nemazvo, chigadzirwa chekupedzisira chinogona kuburitsa kukosha kwayo uye kukosha kwekushandisa. Boka redu rekutenga, richitevera tsika yekambani yekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro chete, zvine hunyanzvi mukutsvaga nekutenga zvemhando yepamusoro zvigadzirwa.
CNC Kuveza ▼
Michina muindasitiri yematombo yakaitika pasina nguva Asi yakawedzera zvakanyanya indasitiri. Kunyanya CNC michina, iyo inobvumidza kune mamwe ekugadzira maficha uye dhizaini yematombo echisikigo. Nemuchina weCCC, maitiro ekuveza matombo akajeka uye anoshanda. ▼
4) kana paine chero zvidimbu zvine hurema: maburi, mahombe matema mavara, yero yekuzadza iyo inoda kutsiviwa. Mushure mokunge mapaneru ese atariswa uye akanyorwa. Tichatanga kurongedza maitiro
Isu takarongedza kurongedza chikamu. Tiine stock yenguva dzose yehuni uye plywood bhodhi mufekitori yedu, isu tinokwanisa kugadzirisa kurongedza kwemhando yega yega yezvigadzirwa, zvingave zvakajairwa kana zvisingaenderane. Vashandi vehunyanzvi vanogadzira kurongedza kwechigadzirwa chimwe nechimwe nekufunga: kurema kurema kwekutakura kwega kwega; kuve anti-skid, anti-kudhumhana & kushamiswa, isina mvura. Kurongedza kwakachengeteka uye kwehunyanzvi chivimbiso chekuchengetedzwa kwakachengeteka kwechigadzirwa chakapedzwa kune vatengi